एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण
मुख्य खबर, लगानी 116 views
चालू आव २०७४/७५ को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले रू. २ करोड ३७ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा १४ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीको आम्दानी बढेकाले नाफा बढेको देखिन्छ । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको चुक्तापूँजी ३२ प्रतिशतले बढेर रू. १३ करोड ३६ लाख पुगेको छ । कम्पनीले रजर्भ कोषमा रू. ७ करोड ८९ लाख छुट्याएको छ भने बीमा कोषमा रू. १८ करोड ७८ लाख जम्मा भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा रू. २६ करोड ६८ लाख बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीको अगामी बैशाख १० गते हुने साधारण सभामा १० प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशमलव ५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव छ । साथै, ५१ प्रतिशत संस्थापक शेयर संरचना कायम गर्न बोनस शेयर पश्चात कायम हुने चुक्तापूँजीको सर्वसाधारण सदस्यहरुका लागि १ सय ५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने तयारी कम्पनीको छ । एभरेष्टले संस्थापक स्वामित्व कायम पश्चात दुबै समूहका सदस्यहरुका लागि ३ सय प्रतिशत थप हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । यस कम्पनीले आगामी असार मसान्तसम्म रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्‍याउनुपर्नेछ । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापूँजी २०७५ असार मसान्त भित्रमा रू. १ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. १२९४
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. ३१९९
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्यः रू. ६४७
१८० दिनको भारित औसत मूल्यः रू. १९६८.०५
अध्यक्षः राजिब सापकोटा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः कमल गौतम
प्रधान कार्यालयः हात्तीसार, काठमाडौं
स्टक स्टिकरः इआईसी
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दाः
चुक्तापूँजीको तुलनामा कम्पनीको खुद नाफा २० दशमलव ४४ प्रतिशतबाट घटेर १७ दशमलव ७८ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । कम्पनीको दीर्घकालिन लगानी तथा कर्जा रू. १६ करोड ८१ लाख र खुद चालू सम्पत्ती रू. २१ करोड १२ लाख रहेको छ ।
कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा रू. ४ करोड १५ लाख आम्दानी गर्दा रू. १ करोड ७७ लाख खर्च भएको छ । कम्पनीले पुनर्बिमा कमिसनबाट रू. ५ करोड ३५ लाख २५ हजार आम्दानी गरेको छ ।
कम्पनीले ७ सय ६३ जनालाई रू. ३ करोड ८८ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ भने ८ सय ३ जनालाई रू. २२ करोड ६९ लाख दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
कम्पनीको जारी बीमालेखको सङ्ख्या १७ हजार ७ सय ६ र नविकरण गरिएको बीमालेख सङ्ख्या १ सय ३४ रहेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी(वार्षिक) रू. ३५ दशमलव ५७, मूल्य आम्दानी अनुपात ५३ दशमलव ७०, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. ७ सय २३ दशमलव १७ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ३ सय ५५ दशमलव ५९ रहेको छ । सोमवारको शेयर मूल्य नेटवर्थको साढे ३ बढी गुणा छ ।
खरीद चापः कम्पनीको सोमवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप ६ गुणा बढी रहेको छ । सो अवधिसम्म ८ सय १० कित्ता शेयर खरीद र १ सय ३० कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग रहेको थियो ।
१ जनवरी २०१८ २ अप्रिल २०१८
मैनबत्ती विश्लेषणः कम्पनीकोे ५५ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा सेतो मारोबोजु आकृती बनेको छ । यस आकृतीले कम्पनीको शेयर मूल्य आगामी दिनमा बढ्ने सङ्केत देखाउँछ ।
आरएसआईः कम्पनीको ५५ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्यूट्रल जोन (४२ दशमलव २८ स्केल)मा छ । यसले शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनः कम्पनीको ५५ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन २४ दशमलव १२ विन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको छ ।
मुभिङ एभरेजः कम्पनीको ५५ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य २६ दिने मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखाको बिचमा छ । सोमवारको शेयर मूल्य रू. १ हजार २ सय ९४ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. १ हजार ३ सय २६ मा प्रतिरोध पाउन सक्छ भने मूल्य सस्तिएमा रू. १ हजार २ सय ५१ मा टेवा पाउन सक्छ सम्भावना देखिन्छ ।